अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि प्रहरीले किन पक्राउ गरेन छवि र शिल्पालाई ? यस्तो रहेछ कारण || सुनौलो नेपाल
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि प्रहरीले किन पक्राउ गरेन छवि र शिल्पालाई ? यस्तो रहेछ कारण
साउन १८ काठमाडौं चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेलको सम्बंध यतिबेला चर्चामा छ। कानको जाली नै फुटाउने गरी पतिबाट हिंसा पाएको भन्दै असुरक्षित महसुस गरेर सुरक्षा माग्दै प्रहरीसम्म शिल्पा पुगेपछि दुईबिचको सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएको थियो।
छविशिल्पा प्रकरण डिभोर्स सम्म पुगेपछि आरोप प्रत्यारोप लगाउदै अलगै बसेको समयमा छविकी पहिली पत्नी हेमा ओझाको प्रेवशसँगै यस प्रशंगले नया रुप लिएको छ। सार्वजनिक रूपमा एकअर्काका गल्ती देखाउनमा व्यस्त यो जोडी अहिले भने एकाएक गुमनाम छ। कारण बन्यो दुवैविरूद्ध हेमाले दिएको जाहेरी।
हेमाले पति छविराज र सौता शिल्पा दुवैविरूद्ध प्रहरीमा बहुविवाहको जाहेरी दिइन्।
यो प्रकरणमा हेमाको प्रवेश पनि रहस्यमय बन्यो। कारण छविका दुई पूर्वपत्नीहरू गीताञ्जली र नायिका रेखा थापा अनि हालकी शिल्पा पोखरेलका विषयमा मिडियामा धेरै अघिदेखि चर्चा परिचर्चा कायम थियो। यसै क्रममा छवि र शिल्पाविरूद्धको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुविवाह प्रकरणमा पक्राउ आदेश जारी गरेपछि अहिले दुवै गुमनाम फरार अवस्थामा रहदै आएका छन।
अदालतको पक्राउ पुर्जी जारी भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार प्रहरीले उनीहरुको कहाँ छन भन्ने पत्ता लगाउन नसकेकोे बताइएको छ।
अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि छवि र शिल्पा दुवैलाई खोज्दै प्रहरी
छविले माफी मागेपछि छवि र शिल्पाबीच भयो यस्तो सहमति, काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जे देखियो (भिडियो)